"အရငျက နှာခေါငျးလုံးလုံးလေးကနေ နှာတံမွငျ့မွငျ့လေးဖွဈစဖေို့ ခှဲစိတျပွုပွငျမှုပွုလုပျခဲ့တဲ့ အစီအစဥျတငျဆကျသူဖွိုးမေ'' - Cele Gabar
“အရငျက နှာခေါငျးလုံးလုံးလေးကနေ နှာတံမွငျ့မွငျ့လေးဖွဈစဖေို့ ခှဲစိတျပွုပွငျမှုပွုလုပျခဲ့တဲ့ အစီအစဥျတငျဆကျသူဖွိုးမေ”
CeleGabarပရိသတျကွီးရေ ပွောငျးလဲလာတဲ့ခတျေရစေီးကွောငျးအရအစီအစဥျတငျဆကျသူတှဟောဆိုရငျလညျး ပျွာသူ့အခဈြတျောမငျးသားမငျးသမီးတှလေိုပဲဝနျးရံအားပေးခဈြခငျတဲ့သူတှရှေိနကွေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အောငျမွငျတဲ့အစီအစဥျတငျဆကျသူတှထေဲမှာ ခတျေ​သဈပြိုမေ အစီအစဥျပွသစဥျကတညျးကပရိသတျတှအေားပေးဝနျးရံခဈြခငျကွတဲ့ ဖွိုးမကေို ပရိသတျတှသေိကွမယျထငျပါတယျနျော။
ဖွိုးမကေတော့အခုနောကျပိုငျးအစီအစဥျတငျဆကျတာတှအေပွငျ Forever Groupကတငျဆကျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှထေဲမှာလညျး ပါဝငျရိုကျကူးလာတာပါ။ဒါ့အပွငျလကျရှိMRTV4မှာပွသလကျြရှိတဲ့ သရဖူဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး နီလာဆိုတဲ့ဇာတျကောငျနဲ့ပါဝငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ဖွိုးမတေဈယောကျ Surgeryတဈခုပွုလုပျဖွဈခဲ့ကွောငျးပွောပွလာခဲ့တာပါ။
ပွုပွငျခဲ့တာကတော့ သူမရဲ့နှာခေါငျးကိုခှဲစိတျပွုပွငျခဲ့ကာ”အဓိကကတော့ သူမြားတှေ မလှဘူးပွောလို့ ၊ဝဖေနျလို့ ပွငျတယျဆိုတာထကျ ..ကိုယျကိုယျတိုငျက လုပျခငျြလို့ .. အမွဲ insecurity တဈခုအနနေဲ့ရှိခဲ့တဲ့ အရာလေးကို ပွုပွငျလိုကျရတဲ့အတှကျ ကနြေပျပါတယျ ..
အခုတော့ မိတျကပျပွငျရငျ အသညျးအသနျ bronzer မသုံးရတာရယျ ..ထိပျက တျောတျောလေးလုံးနတောရယျ ..မရှိတော့တာမို့ တအားကို စိတျခမျြးသာနပေါဘီ ..😁အရငျက နှာခေါငျးလုံးလုံးလေးနဲ့ ဖွိုးမကေို ခဈြပေးကွသလို ..နှာတံမွငျ့မွငျ့နဲ့ ဖွိုးမကေိုလညျး ခဈြပေးကွပါဦးနျော …. 😁😁😍ဘယျလောကျပဲ အသေးစားခှဲစိတျမှုပဲဖွဈဖွဈ ..အရေးကွီးတာက စိတျခရြတဲ့ Surgery Centre ကို ရှေးခယျြဖို့ပါဘဲ …ပွီးတော့ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြကို သခြောလိုကျနာဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ …!!!
“ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပွောပွခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတျတှလေညျးပွောငျးလဲသှားတဲ့ ဖွိုးမရေဲ့ ပုံစံလေးကိူကွညျ့ပွီး ပိုလှလာလားဆိုတာမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
“အရင်က နှာခေါင်းလုံးလုံးလေးကနေ နှာတံမြင့်မြင့်လေးဖြစ်စေဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြိုးမေ”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေဟာဆိုရင်လည်း ပြာ်သူ့အချစ်တော်မင်းသားမင်းသမီးတွေလိုပဲဝန်းရံအားပေးချစ်ခင်တဲ့သူတွေရှိနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေထဲမှာ ခေတ်​သစ်ပျိုမေ အစီအစဉ်ပြသစဉ်ကတည်းကပရိသတ်တွေအားပေးဝန်းရံချစ်ခင်ကြတဲ့ ဖြိုးမေကို ပရိသတ်တွေသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ဖြိုးမေကတော့အခုနောက်ပိုင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်တာတွေအပြင် Forever Groupကတင်ဆက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာလည်း ပါဝင်ရိုက်ကူးလာတာပါ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိMRTV4မှာပြသလျက်ရှိတဲ့ သရဖူဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း နီလာဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ပါဝင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ဖြိုးမေတစ်ယောက် Surgeryတစ်ခုပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပါ။
ပြုပြင်ခဲ့တာကတော့ သူမရဲ့နှာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့ကာ”အဓိကကတော့ သူများတွေ မလှဘူးပြောလို့ ၊ဝေဖန်လို့ ပြင်တယ်ဆိုတာထက် ..ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လုပ်ချင်လို့ .. အမြဲ insecurity တစ်ခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ အရာလေးကို ပြုပြင်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ် ..အခုတော့ မိတ်ကပ်ပြင်ရင် အသည်းအသန် bronzer မသုံးရတာရယ် ..ထိပ်က တော်တော်လေးလုံးနေတာရယ် ..မရှိတော့တာမို့ တအားကို စိတ်ချမ်းသာနေပါဘီ ..😁အရင်က နှာခေါင်းလုံးလုံးလေးနဲ့ ဖြိုးမေကို ချစ်ပေးကြသလို ..နှာတံမြင့်မြင့်နဲ့ ဖြိုးမေကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါဦးနော် …. 😁😁😍ဘယ်လောက်ပဲ အသေးစားခွဲစိတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ..အရေးကြီးတာက စိတ်ချရတဲ့ Surgery Centre ကို ရွေးချယ်ဖို့ပါဘဲ …ပြီးတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို သေချာလိုက်နာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် …!!!
“ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဖြိုးမေရဲ့ ပုံစံလေးကိူကြည့်ပြီး ပိုလှလာလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Previous post ပိုပို့ကိုယျစားပွုလုပျပေးခဲ့တဲ့ မှေးနကေ့ောငျးမှုကုသိုလျတှကေို မြှဝလောခဲ့တဲ့ ပိုပို့ရဲ့ Admin Team
Next post နှဈပေါငျး (၁၆၀)ရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ကြောငျးဟောငျးကွီးပွုပွငျရနျ ဗနျးမျောဆရာတျောကွီးထံ အလှူငှတှေေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ လငျးလငျး